QM oo si khaas ah u eegaysa habka loo maareeyo taageerada dhaqaale ee shalay la siiyey Soomaaliya – Radio Daljir
QM oo si khaas ah u eegaysa habka loo maareeyo taageerada dhaqaale ee shalay la siiyey Soomaaliya
Seteembar 17, 2013 3:15 b 0
New York, September 17, 2013 – Gollaha amaanka ee Qaramada Midoobey ayaa guul taariikhi ah iyo natiijo wax ku ool ah ku tilmaamay nuxurka shirkii ?New Deal? ee shalay oo isniin ah ka dhacay magaalada Brussels, kaas oo Soomaaliya loogu yaboohay 1.8 Bilyan oo Uero.
Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobey Bank Moon ayaa ka hadlay natiijada shirka ka soo baxday, waxaa uu sheegay Mr. Bank in Soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan iyo caqabado hor istaagay in guul la gaaro.
Xog-hayaha oo ka hadlayey dhaqaalaha la siiyey Soomaaliya ayaa sidoo kale xusay in arintaan ay tahay talaabo muhiim u ah dib-u-dhiska iyo amniga Soomaaliya, wuxuuna guul aan la ilaawi doonin iyo shir taariikhi ah ku tilmaamay New Deal.
Qaramada Midoobey sidoo kale waxay balan-qaaday in ay il-gaar ah ku hayn doonto la socodka iyo fulinta balan-qaadkii iyo hir-gelinta dhaqaalihii loogu yaboohay dalka Soomaaliya, lacagtaas ayuu xoghaye Bank Moon ku tilmaamay mid wax weyn ka bedelaysa dalka.
Dowladda Soomaaliya ayuu Mr. Bank ku sifeeyey mid ka duwan kuwii hore isagoo ku baaqay in si wanaagsan looga faa?iideysto lacagta ku dhow $2.5 Bilyan ee Dollar saddexda sano ee soo socota, dhaqaalaha Soomaaliya loo balan-qaaday ayaa lagu sheegay mid mustaqbal fog ku hagi karta dalka.
Laamaha amniga Caabud-waaq oo degniin u jeediyey dadka hubka sharci darrada ah qaata (Dhegeyso)
Al-shabaab oo marin habaabin iyo dal-qaybsi ku tilmaamay nuxurka shirkii Hiigsiga cusub